Jenesis 25 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ebreham lụrụ nwaanyị ọzọ (1-6)
Ebreham nwụrụ (7-11)
Ụmụ Ishmel (12-18)
A mụrụ Jekọb na Ịsọ (19-26)
Ịsọ nyefere Jekọb ihe o kwesịrị inweta dị ka ọkpara (27-34)
25 Ebreham lụrụ nwaanyị ọzọ. Aha ya bụ Ketura. 2 Ka oge na-aga, Ketura mụụrụ ya Zimran, Jọkshan, Midan, Midian,+ Ishbak, na Shua.+ 3 Jọkshan mụrụ Shiba na Didan. Ụmụ Didan bụ Ashurim, Letushim, na Leumim. 4 Ụmụ Midian bụ Ifa, Ife, Henọk, Abaịda, na Eldea. Ha niile bụ ụmụ Ketura. 5 Mgbe e mechara, Ebreham nyere Aịzik ihe niile o nwere,+ 6 ma Ebreham nyere ụmụ ndị iko ya mụụrụ ya onyinye. Mgbe ọ ka nọ ndụ, ọ gwara ha ka ha si n’ebe Aịzik nọ kwapụ.+ Ha wee kwaga n’ala ndị dị n’ebe ọwụwa anyanwụ. 7 Ebreham dịrị ndụ otu narị afọ na iri asaa na ise (175). 8 Ebreham wee kubie ume ma nwụọ mgbe o mere ezigbo agadi. Ọ kara nká, ndụ ya jukwara ya afọ. E wee lie ya otú e liri ndị nna nna ya. 9 Aịzik na Ishmel ụmụ ya liri ya n’ọgba dị na Mak-pila, n’ala Ifrọn nwa Zoha onye Het, nke dị n’ihu Mamri,+ 10 ya bụ, ala Ebreham zụrụ n’aka ụmụ Het. Ọ bụ n’ebe ahụ ka e liri Ebreham na Sera nwunye ya.+ 11 Mgbe Ebreham nwụchara, Chineke nọ na-agọzi Aịzik nwa ya.+ Aịzik bi nso na Bia-lehaị-rọị.+ 12 Ihe a bụ akụkọ ndụ Ishmel+ nwa Ebreham, onye Hega,+ nwaanyị Ijipt na-ejere Sera ozi, mụụrụ Ebreham. 13 Ihe a bụ aha ụmụ Ishmel n’ezinụlọ n’ezinụlọ: Ọkpara Ishmel bụ Nebeyọt.+ Ụmụ ya ndị ọzọ bụ Kida,+ Adbiel, Mibsam,+ 14 Mishma, Duma, Masa, 15 Hedad, Tima, Jitọ, Nefish, na Kedema. 16 Ọ bụ ha bụ ụmụ Ishmel, ọ bụkwa ihe a bụ aha ha n’ọnụmara n’ọnụmara nakwa n’ebe ha mara ụlọikwuu ha. Ha dị ndị isi iri na abụọ. Onye nke ọ bụla nwere ọnụmara nke ya.+ 17 Ishmel dịrị ndụ otu narị afọ na iri atọ na asaa (137). O wee kubie ume nwụọ, e lie ya otú e liri ndị nna nna ya. 18 Ụmụ ya wee biri malite na Havila+ n’akụkụ Shọọ,+ bụ́ ebe dị nso n’Ijipt, ruo Asiria. Ha bi ụmụnne ha niile nso.*+ 19 Ihe a bụ akụkọ ndụ Aịzik nwa Ebreham.+ Ebreham mụrụ Aịzik. 20 Aịzik dị afọ iri anọ mgbe ọ lụrụ Ribeka nwa Betuel+ onye Eram* nke dị na Padan-eram. Ribeka bụ nwanne Leban onye Eram. 21 Aịzik nọ na-arịọsi Jehova arịrịọ ike maka nwunye ya, n’ihi na ọ bụ nwaanyị aga. Jehova nụrụ arịrịọ ya, Ribeka nwunye ya wee dị ime. 22 Ụmụ o bu n’afọ malitere ịgba mgba,+ ya asị: “Ọ bụrụ otú a ka ọ na-adị, ànọ m ndụ eme gịnị?” O wee kpee ekpere jụọ Jehova ihe mere ihe a ji na-eme. 23 Jehova sịrị ya: “Mba abụọ nọ gị n’afọ,+ mba abụọ ga-esikwa n’afọ gị pụta.+ Otu mba ga-aka mba nke ọzọ ike,+ nke okenye ga-ejekwara nke nwata ozi.”+ 24 Mgbe oge ọ ga-amụ nwa ruru, ọ mụrụ ejima. 25 Mgbe nwa nke mbụ pụtara, ahụ́ ya niile na-acha ọbara ọbara, ajị jukwara ya ahụ́.+ Ha wee gụọ ya Ịsọ.*+ 26 Mgbe nwa nke abụọ na-apụta, o jidere Ịsọ nwanne ya aka n’ikiri ụkwụ.+ Aịzik wee gụọ ya Jekọb.*+ Aịzik dị afọ iri isii mgbe Ribeka mụrụ ha. 27 Mgbe ụmụaka ahụ na-eto, Ịsọ ghọrọ dinta,+ nwoke na-aga n’ọhịa. Ma Jekọb bụ nwoke na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta, onye bi n’ụlọikwuu.+ 28 Aịzik hụrụ Ịsọ n’anya maka na ọ na-egbutere ya anụ ọ na-ata, ma Ribeka hụrụ Jekọb n’anya.+ 29 Otu mgbe, Jekọb nọ na-esi ofe mgbe Ịsọ si n’ọhịa lọta, ike gwụkwara ya. 30 Ịsọ wee sị Jekọb: “Biko, kunyetụ m ofe a na-acha ọbara ọbara ngwa ngwa, n’ihi na ike gwụrụ m.” Ọ bụ ya mere aha ya ji bụrụ Ịdọm.*+ 31 Jekọb wee sị ya: “Buru ụzọ nyefee m ihe i kwesịrị inweta dị ka ọkpara.”+ 32 Ịsọ wee sị ya: “Ị̀ hụkwara na agụụ na-achọ ịgụgbu m? Olee uru ọ baara m na m bụ ọkpara?” 33 Jekọb sịziri ya: “Buru ụzọ ṅụọrọ m iyi.” O wee ṅụọrọ ya iyi ma kwuo na ya enyefeela ya ihe o kwesịrị inweta dị ka ọkpara.+ 34 Jekọb wee nye Ịsọ achịcha ma kunye ya ofe lentil,* ya erie, ṅụọ ma bilie pụọ. Ịsọ si otú a gosi na o jighị ọkpara ọ bụ kpọrọ ihe.
^ O nwere ike ịbụ, “Ha na ụmụnne ha niile ebighị n’udo.”
^ Ma ọ bụ “Siria.”
^ Ịsọ pụtara “Ajị Ajị.”
^ Jekọb pụtara “Onye Jidere Ikiri Ụkwụ; Onye Na-anapụ Onye Ọzọ Ihe Ya.”
^ Ịdọm pụtara “Ọbara Ọbara.”
^ Mkpụrụ lentil na-adị ka mkpụrụ àgwà.